education | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
လာမည့်နှစ် ဇန်နဝါရီတွင် အဘေးဆုံးတာ နှစ် ၃ဝ ပြည့်တော့မည်မို့ ကျန်ရစ်သော သားမြေးမြစ်များ က အမှတ်တရ စာလေးတအုပ်လောက် ထုတ်ဖို့ကောင်းကြောင်း ပြောနေစဉ် ရန်ကုန်က သူ့တူမ ဗိုလ်မှူးကြီး လှအောင် (ဟင်နရီစမိုက်၊ ခြေလျင်တောင်တက်)၏ ဇနီး ဆုံးပါသည်။ အမျိုးတအုပ်တွင် တူတယောက် ၉ဝ ကျော်သာ ဝါအရင့်ဆုံး ရှိနေပီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စိန်ရတုတွင် အသက် အငယ်ဆုံး ကန်တော့ခံ ကျောင်းသားဟောင်း လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူ့ဖခင် ဦးဖူးညို မှာ ရွှေဥဒေါင်း တသက်တာ မှတ်တမ်း ထဲက ကျောင်းနေဘက် ကိုဖူးညို (ဂျပ်ဆင် ကောလိပ်) ဖြစ်ပီး ရန်ကုန် ကောလိပ် ဘက်က ကိုထွန်းရှိန် (ဖေပုရှိ်န်) ကိုကွန်း […]
Filed under: education, family, history, opinion, politics	| LeaveaComment
ပန်းများမပွင့်သေးသော အမေရိကနွေဦး တမနက် ချီကာဂိုတောပိုင်းတက္ကသိုလ်တခု ပိဋကတ်တိုက်မှ ရှေးဗမာ လက်ဝဲစာတအုပ် နောက်ကျောဖုံးတွင် မအုန်း ပြန်ဆိုသော ဆိုဗီယက် အမျိုးသမီးလောက စာအုပ်ကြော်ငြာကို မြင်မိသည်။ အမ်အေမအုန်းပါလားဟု ဗီဇသိက ဖျတ်ခနဲ ပေါ်လာသည်။ မအုန်းသည် အဘယ်ကြောင့် လက်ဝဲစာအုပ်တိုက်မှ စာအုပ် လက်ရွေးစင် တွေထဲ ဝင်ရေးရသနည်း။ မေးစရာ မလိုပေ။ မအုန်းသည် တက္ကသိုလ် ဆရာမကြီး ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံရေးကျောင်းသူမှ လာသူဖြစ်သည်။ အစ်မကြီးတို့ တိုင်းပြည် ထူထောင်ရေးအတွက် လုပ်ကြရအုံးမယ် ခဏရှောင်နေကြပါအုံးဟု ဂျပန်တော်လှန်ခါနီး အာရှလူငယ်တွေ လူစုခွဲချိန်တွင် ဗိုလ်အောင်ကြီးက ဒေါ်ရီကြိန်၊ ဒေါ်သင်းကြည်၊ ဒေါ်အုန်း စသည့် မိန်းမတသိုက်ကို အဘယ်ကြောင့် မှာလိုက်သနည်း။ အဆက်အစပ်တို့က ပေါ်လာသည်။
Filed under: anniversaries, Burmese women, education, history, literature, politics	| LeaveaComment
စကားလုံးများဟာ လူတွေရဲ့ အတွေးတွေ နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများမှာ သုံးလိုက်တဲ့ စကားလုံးတိုင်းမှာ အစွမ်းတွေရှိပါတယ်။ အခုလို သွေးဆူနေတုန်းဆို လူကိုသေတောင် သေလောက်စေ နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ နားထောင်သူများကို ကိုယ်မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တမင်တကာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိကရုဏ်းကြီးထွားလာစေရေး ကိုသာ ရောက်စေလို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။
Filed under: arts and culture, education, guest column, media	|2Comments
လူထုစိန်ဝင်း ကြည်မင်းစသည့် စာရေးဆရာကြီးများက မြန်မာရသစာ နိမ့်ကျတိမ်ကောလာမှုကို သတိပေးပေါင်းများပီ။ ဖေတော့မောင်တော့ ဆူလွယ်နပ်လွယ်နှင့် မော်ဒန် အမည်ခံ စာယောင်စူးများ တိုင်းပြည်တွင် ထွန်းကားနေသည်မှာ အနှစ် ၂ဝ ချဉ်းတော့မည်။ တိုင်းပြည်၏ ပစ္စက္ခအခြေကို အမြင်ယွင်းမှားပီး လူမှု အဆောက်အအုံ ပြိုကွဲမှုကို အများအာရုံမစိုက်နိုင်အောင် မယ်ဘွဲ့ မောင်ဘွဲ့ စိတ္တဇ တကိုယ်တော် ဝါဒဘက် ယိုင်အောင် ညှပ်ပီး ပုံသွင်းသလို ရှိနေခဲ့သည်။ စာပေ စိစစ်ရေး မရှိသည့်နောက် တောနယ် မြို့ပြ မြန်မာနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ လူမှုသရုပ်မှန်ကို ဖော်ကျူးမည့် စာကြေးမုံမျိုး ပြန်မှ ထွက်လာပါ့မလား သံသယပင် ကြီးရသည်။ ထိုထက် သုတ စာပေ ချွတ်ချော်မှုကို ထောက်ပြသူ နည်းသူ ထင်ပါသည်။ ဗမာကဲ့သို့ ယဉ်ကျေးမှုကြီးတို့၏ […]
Filed under: education, media	| LeaveaComment
Taboos for the Burmese ‘Liberal’ Democracy
Filed under: education, politics	| 1 Comment
ကမ္ပည်းကျောက်စာဝန်နေရာရွှေ့သွားသော ပြင်သစ်လူမျိုး ဒူရွိုင်ဇယ်၏ ရန်ကုန်ကောလိပ် ပါဠိပရိုဖက်ဆာဆရာကြီးနေရာတွင် ရန်ကုန်ဟိုက်စကူးကျောင်းဆရာကြီး ၂၄ နှစ်ရွယ်သူ မန္တလေးတောင်ခွင်သာသနာပိုင်မြေး မြန်မာခရစ်ယာန် မောင်တင် (အမ်အေ၊ ကာလကတ္တား)ကို ဟိုနှစ်တရာက ခန့်ထားသည်။ ဘားနတ်ပိဋကတ်တိုက်အုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်၊ လန်ဒန်ပါဠိအသင်း အရှေ့တိုင်းကိုယ်စားလှယ်၊ အစိုးရပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲစစ်အရာရှိတာဝန်များလည်းယူရသည်။ ၁၉၂၀ တွင် မောင်တင်ကို အောက်စဖို့ဒ်ပို့၍ ဘီလစ် စာပေဘွဲ့ယူစေရာ အဋ္ဌသာလိနီခေါ် အဘိဓမ္မာ အဋ္ဌကထာကျမ်းနှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂအဋ္ဌကထာကျမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ဘွဲ့ယူခဲ့သည်။ ထိုဘွဲ့ရဘူးသူ သူ့နောက်တွင် ဒေါ်မြစိန်၊ ဒေါက်တာထင်အောင်နှင့် မင်းသုဝဏ်တို့ဖြစ်သည်။ ဘိလပ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာပေနှင့် မြန်မာစာပေ သဘောကို ဆင်ခြင်မိရာမှ ရှေးဟောင်းစာပေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန် စိတ်ကူးပေါက်သည်။ ခေတ်မီမြန်မာစာပေသစ်ကို ဖန်တီးရန်လည်း အကြံရသည်။ အောက်စဖို့ဒ် ဗော့ဒလီယန်စာကြည့်တိုက်၊ လန်ဒန် ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်၊ အိန္ဒိယပြတိုက်၊ အိန္ဒိယရုံးစာကြည့်တိုက်တို့တွင်ရှိ […]
Filed under: anniversaries, education, literature, nationalism	|2Comments
D.G.E. Hall Scholarship Deadline: 31 January 2012
Hall Scholarship D.G.E. Hall Scholarship Deadline: 31 January 2012 There is one D.G.E Hall Scholarship for applicants who are proposing to register full-time for taught Masters programmes at SOAS in the academic session 2012/13. The scholarship is shared with International Student House (ISH). The minimum value of the scholarship provided by SOAS will be £12,000 […]
Filed under: education, news	| LeaveaComment
Check n Balance
State and Religion in Burma
British Museum Collection on Burma
Burmese Language Resources, SOAS
from ANU on SEA
US national Center for Burma Studies